site na nhazi na 20-07-14
Ọdịiche dị n'etiti ventilashị na-ere ikuku na ikuku ventilat na-abụghị nke ibibi
1. Site na nhazi nke ngalaba njikwa ngwaọrụ ahụike, ndị na - eme mpụ ikuku na - abụghị akụkụ nke abụọ nke ngwaọrụ ahụike, ndị na - ebubata ikuku nke ikuku dị n'ụdị nke ngwaọrụ ahụike (ọkwa kachasị elu nke ngalaba nke atọ chọrọ ndị S ...
You ga - eji ikuku ventilashị na - abụghị nke na - abaghị uru maka iji rụọ ụlọ?
Ugbu a ọnọdụ obibi ndụ dị mma, ọtụtụ ngwaọrụ metụtara ọgwụ, dịka ndị na-enye oxygen na ndị na-anaghị efe efe abanyela ezinụlọ anyị, na-ewetara ọtụtụ ndị ọrịa ọnọdụ obibi ndụ ka mma. Yabụ, ị̀ na - eji mmiri na - ere ọkụ na - abụghị ọkpọka n'ụlọ? Noninvasive v ...
I Nwere ike Ihi Ura? Gbalịa Usoro 5 ndị ​​a
Ọ dịla okenye chọrọ ụra 8 ụra kwa ụbọchị na nkezi, oke na ezughi oke ga-emetụta ahụ ike. N'ezie, ọtụtụ mmadụ maara mkpa na usoro nke ụra abalị dị mma, mana ọ na - esiri ike ime mkpebi na arụmọrụ ...
Ofkpụrụ nke itinye mkpuchi site na ventilashị na-abụghị nke na-adịghị efe efe
Mgbe ọtụtụ afọ nyocha nke ụlọ ọgwụ, ọgwụgwọ ikuku na-adịghị emerụ ahụ nke ọrịa mkpachi okpo iku ume na-enwe mmetụta doro anya. N'ihi uru dị iche iche nke arụghị ọrụ, arụ ọrụ dị elu na nchekwa, usoro ventilashị abụrụla ụzọ kachasị dị irè maka ịgwọ snor ...
Gịnị bụ Snoring？ Snoring bụ ụda dara ụda na-eku ume mgbe niile ị na-ehi ụra. N'agbanyeghị na ọ na-ahụkarị na ndị mmadụ karịrị akarị, ọ bụ ọrịa nkịtị nke nwere ike imetụta onye ọ bụla. Igwu mmadu ga-akawanye nká na nká. Inbu asusu na oge adighi abughi ezigbo pr…
Kedu ihe bụ uru dị na ikuku na-adịghị mma nke ikuku na-enye nsogbu na COPD?
Usoro ọgwụgwọ ikuku nke ikuku COPD na-abụghị nke na-akpaghasị ike nwere ike izu ike mọzụlụ nke ike ọgwụgwụ ike Ngwọta ikuku usoro ikuku ume nke ikuku COPD na-eme ka ọrụ ngụgụ na gas na -emepụta, ma na-emekwa ka ihe atụ nke nyocha ọbara gas pụta; Ndị na-abụghị ndị invas ...
Kedu ihe kpatara a ga-eji COPD jiri ikuku nrụgide na-abụghị nke a na-adịghị ahụ mma?
Oge nkwụsi ike nke COPD: Na mba Europe na America, n'ihi ọkwa dị elu banyere mmata banyere ọrịa na ịmara ọrịa ahụ, ọkwa akụ na ụba na usoro inyeghachi ego karịrị akarị, usoro ọgwụgwọ ikuku ikuku anaghị enye ndị ezinụlọ nwere COPD aka…
Ọdịiche dị n’etiti ụlọ na-anaghị ekupụ ikuku na igwe Oxygen
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-eku ume ọkụ na ikuku na-eku ikuku bụ ihe eji ahụike ụlọ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere mgbagwoju anya banyere ihe dị iche na ventilashị na onye na - ewepụta oxygen. Ha na-elele ikuku na-eku ikuku dị ka igwe na - ewepụta ikuku oxygen ma na - eche n'ụzọ ezighi ezi na ve ...
Olee otu ị ga - esi chekwaa ndị ọrịa COPD
Nke mbu, onye obula kwesiri ighota, gini bu “ngwo ngwo ngwo ngwo”? Maka ọtụtụ mmadụ, "ngụgụ na-egbochi ngwa ngwa" a na-anụkarị ihe ị na-amaghị, mana "alaka ochie na -adịghị ngwa ngwa" na "pulmonary emphysema" bụ ndị mmadụ maara nke ọma. N'ezie, "ngụgụ na-egbochi ngwa ngwa" bụ "agadi s ...